महासंघले ठुला व्यवसायीको मात्र होइन साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा वकालत गर्नु पर्छ दिनेश श्रेष्ठको अन्तरवार्ता « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
१० मंसिर २०७७, बुधबार १ : ५५ बेलुका
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिक आएसँगै उम्मेदवारहरु उत्साहित बनेका छन् । आफुले पुर्याएको योगदान र आगामी दिनका कार्ययोजना सहित मत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना तिब्र बनिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा शेखर गोल्छा समुहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवरी दिएका दिनेश श्रेष्ठ आफुले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । मंसिर १३ गते हुन गईरहेको निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान बनाउँदा देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले ब्यवसायीलाई हित हुने गरी कामहरु भएका छन । त्यसका साथै उद्योगी व्यवसायीसंग छलफल नै नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरुमा समेत सरकारलाई कन्भिएन्स गरेका छांै । प्यनमा दर्ता नभई खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्थालाई सरकारले एक वर्ष पछि पुनरावलोकन गरेको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजको दरमा २ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले लिने गरेको सेवा शुल्कमा समेत कमी आएको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा महासंघको नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने गरी काम गरेको स्पष्ट छ । महासंघले गरेका यी काम नै पुर्ण होइन । महासंघले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अझै धेरै काम छन । ती कामहरु गर्नका लागि महासंघ सक्षम पनि छ ।
उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मात्र नभै नयाँ आउने उद्यमीलाइ समेत आवश्यक सुचना दिनका लागि उद्योगी बाणिज्य संघहरुलाइ सबल बनाउन जरुरी छ । त्यसका साथै जिल्ला नगरका उद्योग व्यवसायको लागि गर्नु पर्ने कामका सन्दर्भमा समेत तयारी गरिसकेको अवस्था छ । हामीले तयार गरेको खाकाको सन्दर्भमा चुनाव सकिएको एक महिना भित्र जिल्ला नगरका साथीहरु विच छलफल गर्नेछौं । जिल्ला नगरका साथीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर आगामी १० वर्षका लागि मागदर्शन बनाउने तर्फ हामी लागेका छौ । जिल्ला नगरका साथीहरुले स्थानीय तहका उद्योग व्यवसायका सामान्य भन्दा सामान्य समस्याको सन्दर्भमा पनि महासंघको नेतृत्वले बोल्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन ।
हामीले चुनाव जितेको ६ महिनासम्ममा जिल्ला नगरका साथीहरुलाइ हामीले काम नगरेको भन्ने लागेको खण्डमा हटाउने अधिकार पनि उहाँहरुसंगै छ । जिल्ला नगरका समस्या ठुला उद्योगी व्यवसायीका लागि सानै हुन्छ । ठुला व्यवसायीलाइ सानो समस्याले खासै असर नगरेपनि साना तथा मझौला उद्यमीका लागि तीनै समस्या ठुला हुन्छन । देशैभरी सञ्जाल रहेको उद्योग बाणिज्य महासंघले एक स्थानको उत्पादन सहज रुपमा अर्को स्थानका बिक्री गर्ने बातावरणको विकास मात्र गर्न सकिएको खण्डमा पनि ठुलो काम हुनेछ । कुनै एक व्यक्तिले देशै भरी उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको भन्दैमा महासंघको नेतृत्वमा आउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन । एसोसिएट्सवाट नेतृत्वमा पुग्नु भएकाले जिल्ला नगरलाई जसरी अघि बढाउन लाग्नु भएको छ । यो साच्चीकै मनन योग्य कुरा हो । हामी स्पष्ट विचार सहित बोलेको हुनाले नतिजा ल्याउने गरी अघि वढेका छौ । अहिले जिल्ला नगरको उत्पादनले बजार नपाएर खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई आवश्यक बजार खोज्नका लागि सकरात्मक भुमिका हामीले खोल्नेछौ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने कानुन बनाउनेले उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि बनाएको अवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीलाइ नियन्त्रण गर्नु पर्छ । तर, कार्यान्वयन योग्य ऐन कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्छ । अहिले ढक तराजु ३५ दिन भित्र नविकरण नगरेको खण्डमा जेलमा राख्ने कानुन बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा कानुन बनाउँदा हिजोको जरीवानामा सुन्य थप गर्ने, वा को ठाउँमा र राख्ने, एक महिनाको जेल साजायको ठाँउमा एक वर्ष गर्ने गरेर हतारमा झारो टार्ने किसिमले कानुन निमार्ण गरिएको छ । गत असोज भित्र बनाइसक्ुन पर्ने भएकाले यस्तो गरेर कानुन बनाइएकोमा हाम्रो असहमती छ । छुट्टै चेम्बर ऐन बन्नु पर्छ, क्रेडिट ऐन, व्यवसायीको लगानी पनि सुरक्षित गरी सुरक्षित कारोबार ऐन आउनु पर्छ । अहिले कारोबार ऐन छ तर, त्यसका केही प्रावधानहरु गलत छन् । राज्य संयन्त्रका कर्मचारीले हामी प्रति देखाउने ब्यबहार गलत छ । यसकारणले पनि व्यवसायीहरुले नचाहेर पनि गलत बाटो अपनाएर व्यवसाय गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
कर्मचारीलाइ कारबाही गर्ने भनेको विभागीय कारबाही रे । त्यो पनि गलत नियत देखिएको खण्डमा मात्र कारबाही गरीने भनिएको छ । कर्मचारीको नियत गलत र सही भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरुले कुनै निश्चित व्यक्तिको निहीत स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । साना व्यवसायीले मिति नाघेको सामान चाहेर किनेको होइन ।
६ महिना मात्र म्याद भएका उत्पादनहरु आयात गर्न भन्सारले किन दियो ?
भन्सारको त्यो कर्मचारीलाइ कारबाही गर्नु पर्छ की पर्दैन ? अब हाम्रो खुला सिमाना आर्थिक रुपमा शिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । करका दरहरु उच्च भएका कारण बोर्डरमा नेपाली क्षेत्रको व्यवसाय सुन्य अवस्थामा छ भने छिमेकी देशपट्टी चहलपहल छ । सरकारले द्धन्द्धका कारणले खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएको भन्दै १० प्रतिशतको भ्याटलाई ३ प्रतिशतले वढाएर १३ प्रतिशत कायम ग¥यो । अहिलेको अवस्थामा द्धन्द्ध त छैन । त्यसैले भ्याटको दरलाई घटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । करका दरहरु धेरै भएको खण्डमा चोरी पैठारी बढी हुन्छ । अनियमित कारोबार धेरै हुन्छ । कर, भन्सार, रोजगार तथा बैंक सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु छन । यस्ता समस्याहरुलाइ समाधान गर्नका लागि महासंघ लागि पर्नेछ । हाम्रो समुहमा यी सबै समस्याका कारण र समाधानका बाटोहरु पहिल्याउने क्षमता राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । यसमा देशभर साना तथा ठुला सबै उद्योगीको प्रतिक्रिया लिएर अघि वढ्छौ । यसमा राज्यले पनि नीजि क्षेत्रवाट के चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नु पर्छ ।
प्रतिद्वन्दीलाई पनि विजयी भएको अनुभूति गराएर कांग्रेसलाई अगाडि बढाउँछु : राजु श्रेष्ठ
विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप भित्र्याउन सके मात्र देश समृद्ध बन्छ : डा. बद्री केसी, अध्यक्ष (प्रत्यासी), एनआरएनए
कर्म गर्नुहोस फल आफै मिल्छ : साहित्यकार बिमला हुमागाईं “बोध”